रोबक्सिन बनाम फ्लेक्सिरिल: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस चेकआउट कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि बनाम मित्र कम्पनी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी समाचार, कल्याण औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, समाचार समाचार
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> रोबक्सिन बनाम फ्लेक्सिरिल: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
रोबक्सिन बनाम फ्लेक्सिरिल: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
के म ३ ibuprofen २०० mg लिन सक्छु?
ब्रान्ड-नाम फ्लेक्सिरिल बन्द गरिएको छ; जे होस्, यो अझै पनि जेनेरिक — cyclobenzaprine as को रूपमा उपलब्ध छ र ब्रान्ड नाम Amrix र Fexmid को रूपमा।
मांसपेशी रिलैक्सन्टहरू प्राय: सबै भन्दा पहिले दिइएका औषधिहरू हुन् जुन फिर्ता दुखाइ र अन्य तनाव वा मोचको उपचार गर्न सकिन्छ। रोब्याक्सिन (मेथोकार्बमोल) र फ्लेक्सिरिल (साइक्लोबेन्जाप्रिन) कंकालको मांसपेशी शिथिलता (एसएमआर) का उदाहरण हुन् जुन तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्धारित गर्न सक्दछ यदि तपाईंले मांसपेशिको दुखाइ अनुभव गर्नुभयो भने।
दुबै रोबक्सिन र फ्लेक्सेरिल केन्द्रीय स्नायु प्रणाली (सीएनएस) मा अभिनय मार्फत समान तरिकाले काम गर्दछन्। थप एन्टिस्पास्मोडिक एजेन्टहरूको रूपमा वर्गीकृत, रोबक्सिन र फ्लेक्सेरिल तीव्र, पीडादायीको उपचारको लागि प्रभावकारी छन् Musculoskeletal अवस्था त्यो असुविधा र मांसपेशिको ऐंठनको कारण। उनीहरुसँग उस्तै साइड इफेक्टहरू पनि छन् जस्तै निन्द्रा र चक्कर आउँछ।
रोबक्सिन र फ्लेक्सिरिल बीचका मुख्य भिन्नताहरू के हुन्?
रोबक्सिन, यसको सामान्य नाम methocarbamol द्वारा परिचित, १ 60 s० को दशकमा बजारमा जारी गरिएको थियो। जबकि यसको कार्यको सही संयन्त्र अज्ञात छ, रोबक्सिन (रोबक्सिनको बारेमा जान्नुहोस्) लाई यसको शामक प्रभावहरू बाट असुविधा हटाउने विश्वास गरिन्छ। यसले मांसपेशीको संकुचनलाई प्रत्यक्ष असर गर्दैन।
रोबक्सिन एक ब्रान्ड नाम वा जेनेरिक औषधिको रूपमा उपलब्ध छ। यो एक इन्जेक्शनको साथ साथै mg०० मिलीग्राम वा 5050० मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा आउँदछ। जो रोबक्सिन ट्याब्लेटहरू सिफारिस गर्छन् तिनीहरूले दुई वा तीन ट्याब्लेटहरू लिनु पर्छ दिनमा चार पटक सुरुमा। त्यसो भए, एक वा दुई ट्याब्लेटहरू प्रति दिन तीन वा चार पटक वा अधिक सिफारिस गरिन्छ।
फ्लेक्सेरिललाई प्रारम्भमा १ 1970 s० मा एफडीए द्वारा अनुमोदन गरिएको थियो। यो मुख्यतया CNS मा दिमाग को स्टेम र रीढ़ की हड्डी मा काम गर्दछ, जसले मोटर गतिविधि कम गर्न मद्दत गर्दछ। फ्लेक्सेरिल संरचनात्मक रूपमा tricyclic जस्तै छ antidepressants र जस्तै सुखी मुख र बेहोश पार्ने जस्ता साइड इफेक्टहरू छन्।
फ्लेक्सिरिल सामान्यतया यसको जेनेरिक नाम साइक्लोबेन्जाप्रिनबाट चिनिन्छ। ब्रान्ड-नाम फ्लेक्सिरिल बन्द गरिएको छ; यद्यपि साइक्लोबेन्जाप्रिन दुई अन्य ब्राण्ड नामहरूमा उपलब्ध छ: अम्रिक्स (विस्तारित-रिलीज) र फेक्समिड (तत्काल रिलीज)। विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेट प्रति दिन एक पटक लिन सकिन्छ।
सम्बन्धित: साइक्लोबेन्जाप्रिनको बारेमा जान्नुहोस् Fexmid को बारे मा जान्नुहोस्
रोबक्सिन र फ्लेक्सेरिल बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग मांसपेशी आराम
एन्टिस्पास्मोडिक एजेन्ट मांसपेशी आराम
ब्रान्ड नाम फ्लेक्सेरिल अमेरिकामा बन्द छ। अन्य ब्रान्ड नामहरूमा Amrix र Fexmid सामेल छ।
जेनेरिक नाम के हो? मेथोकार्बमोल साइक्लोबेन्जाप्रिन
इंजेक्शन मौखिक ट्याब्लेट
मौखिक क्याप्सूल, विस्तारित-रिलीज
मानक खुराक के हो? प्रारम्भिक खुराक: १00०० मिलीग्राम दैनिक times पटक
रखरखाव खुराक: १००० मिलीग्राम दैनिक रूपमा times पटक, १00०० मिलीग्राम दैनिक times पटक, वा 450० मिलीग्राम प्रत्येक hours घण्टा तत्काल रिलीज ट्याब्लेटहरू: दैनिक5मिलीग्राम तीन पटक। खुराक दैनिक १० मिलीग्राम3पटकसम्म बढाउन सकिन्छ।
विस्तारित-रिलीज क्याप्सूल: १ mg मिलीग्राम दैनिक एक पटक। खुराक दैनिक once० मिलीग्राम एक पटक गर्न सकिन्छ।
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? छोटो अवधि वा लामो समय अवधि उपचार तपाईंको डाक्टर द्वारा निर्देशित रूपमा २ देखि weeks हप्ता भन्दा बढि
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्कहरू र १ adults बर्ष वा माथिका युवा वयस्कहरू वयस्क र युवा वयस्क १ 15 बर्ष वा माथिका
रोबक्सिनमा उत्तम मूल्य चाहनुहुन्छ?
रोबक्सिन मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
शर्तहरू रोबक्सिन र फ्लेक्सेरिल द्वारा उपचार
रोब्याक्सिन र फ्लेक्सिरिल एफडीए तीव्र मस्कुलोस्केलेटल अवस्थाका साथै असुविधा वा मांसपेशिको ऐंठनको उपचार गर्न अनुमोदित छन्। टिटानस ।
रोबक्सिन वा फ्लेक्सेरिल प्राय जसो घाँटी दुखाइ जस्तो मांसपेशीहरूको उपचारको लागि सिफारिस गरिन्छ। दुबै औषधिहरू प्राय: कम तल्लो दुखाइको उपचार गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ, संयुक्त राज्यका वयस्कहरूमा सामान्य समस्या। सम्म वयस्कहरूको %०% आफ्नो जीवनको कुनै बिन्दु मा कम पीठ दर्द अनुभव।
फ्लेक्सेरिल फाइब्रोमाइल्जिया को उपचार गर्न अध्ययन गरिएको छ, एक पुरानो अवस्था जुन शरीरभरि मांसपेशिको दुखाईले लक्षण दिन्छ। फाइब्रोमाइल्जियाका साथ तिनीहरूले व्यापक मांसपेशी दुख्ने साथै निद्रा, थकान र मुडको समस्या हुन सक्छ। एक अनुसार मेटा-विश्लेषण पाँच क्लिनिकल परीक्षण मध्ये, cyclobenzaprine २ sleep हप्ता सम्म को अवधि मा फाइब्रोमाइल्जिया बिरामीहरुमा निद्रा र पीडा सुधार गर्न पाईन्छ।
सर्त रोबक्सिन फ्लेक्सेरिल
मांसपेशी ऐंठन हो हो
Musculoskeletal अवस्था हो हो
टिटानस हो हो
फाइब्रोमायाल्जिया हैन अफ-लेबल
के रोबक्सिन वा फ्लेक्सेरिल अधिक प्रभावकारी छ?
रोबक्सिन र फ्लेक्सेरिल मस्कुलोस्केलेटल दुखाइ र मांसपेशियोंको ऐंठनको उपचारको लागि प्रभावकारी उपचारहरू हुन्। अधिक प्रभावकारी औषधि एक त्यो हो जुन तपाईंको विशेष केसको लागि राम्रो काम गर्दछ।
फ्लेक्सिरिल सबैभन्दा अध्ययन गरिएको मांसपेशि आराम गर्नेहरू मध्ये एक हो; यसैले यसको प्रभावकारिताका लागि यसको अधिक सहयोगी प्रमाण छ। मा व्यवस्थित समीक्षा , यो पत्ता लाग्यो कि सामान्यतया, मांसपेशि आराम गर्ने प्रभावकारितामा तुलना गर्न सकिन्छ। यो समीक्षाले अन्य मांसपेशी विश्रामहरू समावेश गर्दछ जस्तै मेटाक्सोलोन, ब्याक्लोफेन, टिजनिडाइन, ओर्फेनाड्रिन, र क्लोरोक्जोजोन।
Methocarbamol र cyclobenzaprine बीच एक हेड-टू-हेड ट्रायलमा, त्यहाँ थियो कुनै खास फरक छैन मांसपेशी spasms वा कोमलता मा। यद्यपि, बिरामीहरूले साइक्लोबेन्जाप्रिन (% 48% बनाम 40०%) को साथमा स्थानीय पीडामा थोरै सुधारको अनुभव गरे। Cyclobenzaprine अधिक snonosion वा तन्द्रा (% 58% बनाम १०%) उत्पादन गर्न पनि पाइएको थियो।
साइक्लोबेन्जाप्रिनलाई Valium (diazepam) र Soma (carisoprodol) सँग तुलना गरिएको छ क्लिनिकल परीक्षणहरू । साइक्लोबेन्जाप्रिन यस्तै औषधीको लागि एकदम कम प्रभावकारी थियो तीव्र कम फिर्ता पीडाको उपचारको लागि।
चिकित्सा सल्लाहका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस् तपाईंको लागि उत्तम उपचार विकल्पहरू फेला पार्न। एक डाक्टर बाट एक पूर्ण मूल्यांकन पछि, एक औषधि तपाइँको समग्र चिकित्सा ईतिहास मा निर्भर गर्दछ।
कभरेज र रोबक्सिन बनाम फ्लेक्सिरिलको लागत तुलना
जेनेरिक रोबक्सिन ट्याब्लेटहरू प्रायः मेडिकेयर र बीमा योजनाहरू द्वारा आच्छादित हुन्छन्। रोबक्सिन ट्याब्लेटहरू $ 31 को खुदरा लागतमा खरीद गर्न सकिन्छ। एक सिंगलकेयर डिस्काउंट कार्डले यस मूल्यलाई participating lower मा कम भाँच्ने फार्मेसीहरूमा कम गर्न सक्छ।
साइक्लोबेन्जाप्रिनको रब्याक्सिनको तुलनामा retail $२.9999 को उच्च खुद्रा मूल्य छ। जेनेरिक साइक्लोबेन्जाप्रिन ट्याब्लेटहरू प्रायः मेडिकेयर र बीमा योजनाहरूले ढाक्छन्। यदि तपाईंसँग बीमा छैन भने, तपाईं यस फार्मसीमा निर्भर गर्दछ cost 8 भन्दा कममा कटौती गर्न एकलकेयर छुट कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जे होस् तपाईसँग बीमा छ, तपाईलाई मांसपेशि आराम गर्नेहरुमा सस्तो मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भनेर पत्ता लगाउन यो राम्रो उपाय हो।
मानक खुराक Mg०० मिलीग्राम ट्याब्लेट (of० को मात्रा) १० मिलीग्राम ट्याब्लेट (of० को मात्रा)
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ 0– $ 47 $ १– $।।
एकलकेयर लागत $ 7- $ 17 $ 7- $ 12
रोबक्सिन बनाम फ्लेक्सिरिलको साझा साइड इफेक्टहरू
रोबक्सिन र फ्लेक्सेरिलको सबैभन्दा सामान्य दुष्प्रभावहरू निद्रा, चक्कर, र टाउको दुखाइ हो। फ्लेक्सेरिल रोबक्सिनको तुलनामा अधिक निन्द्रासँग सम्बन्धित हुन सक्छ। यसको एन्टिकोलिनर्जिक गुणहरूको कारणले, फ्लेक्सेरिलले पनि निम्त्याउन सक्छ सुख्खा मुख ।
दुबै रोबक्सिन र फ्लेक्सेरिलले थोरै थकान वा मतली को डिग्री लिन सक्छ।
अधिक गम्भीर साइड इफेक्टले अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाहरू समावेश गर्दछ। यी एलर्जी प्रतिक्रिया सास फेर्ने समस्या, गम्भीर दाग, र सूजन को रूप मा प्रकट हुन सक्छ। यदि तपाईंले यी प्रतिकूल प्रभावहरू अनुभव गर्नुभयो भने तत्काल मेडिकल ध्यान खोज्नुहोस्।
तन्द्रा हो * रिपोर्ट गरिएको छैन हो २%%
चक्कर हो * हो १% ––%
टाउको दुखाई हो * हो %%
सुख्खा मुख हैन - हो एक्काइस%
थकान हो * हो %%
मतली हो * हो १% ––%
स्रोत: डेलीमेड ( रोबक्सिन ), डेलीमेड ( फ्लेक्सेरिल )
रोबक्सिन बनाम फ्लेक्सेरिलको ड्रग अन्तर्क्रिया
रोबक्सिन र फ्लेक्सेरिल भएकोले CNS निराशाजनक प्रभावहरू , ती अन्य औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन् समान प्रभावहरू छन्। ड्रग्स जसमा सीएनएस डिप्रेसनन्ट प्रभावहरू बार्बिटुएरेट्स र बेंजोडाइजेपाइनहरू समावेश छन्।
ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसन्ट्स, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इन्हिबिटर (एसएसआरआई), र सेरोटोनिन नोरपाइनफ्रिन रिअपटेक इन्हिबिटर (एसएनआरआई) सहित सेरोटोनर्जिक औषधिहरूले पनि सीएनएस प्रभाव निम्त्याउन सक्छ। यी औषधिहरूको साथ मांसपेशि आराम गर्ने ले बढि साइड इफेक्टहरू हुन सक्छ जस्तै तन्द्रा र चक्कर आउँछ।
रोब्याक्सिनले पिरिडोस्टिग्माइन ब्रोमाइडको प्रभावकारिता घटाउन सक्छ, उपचार गर्न प्रयोग गरिने औषधि myasthenia gravis ।
फ्लेक्सेरिल र एक मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधक (MAOI) को संयोजनले जीवनलाई जोखिम पुर्‍याउने औषधि अन्तर्क्रियाको कारण हुन सक्छ। यो औषधि अन्तर्क्रिया गर्न सक्छ सेरोटोनिन सिन्ड्रोम , जसमा असामान्य रूपमा उच्च ज्वरो, थरथर, बढि पसिना, मतली, र बान्ता जस्ता लक्षणहरू समावेश हुन सक्छ।
औषधि ड्रग क्लास रोबक्सिन फ्लेक्सेरिल
हाइड्रोकोडोन ओपियोइड्स हो हो
अल्प्राजोलम बेन्जोडियाजेपाइन हो हो
रोबक्सिन र फ्लेक्सेरिलको चेतावनी
मांसपेशी आराम गर्नेहरूलाई बेवास्ता गर्न वा अनुगमन गरिनु पर्छ मेशिन सञ्चालन वा मोटर वाहन चलाउनु अघि। मांसपेशी विश्रामहरू जस्तै रोबक्सिन वा फ्लेक्सेरिलले बढ्दो चक्कर वा निन्द्रा र संज्ञानात्मक प्रदर्शन बिगार्न सक्छ।
वृद्ध वयस्कहरूमा मेथोकार्बमोल र साइक्लोबेन्जाप्रिन सिफारिस गरिदैन। दुबै औषधीहरू यसमा छन् बियर सूची , अमेरिकी जेरियाट्रिक्स सोसाइटीले तयार गरेका औषधीहरूको मान्यता प्राप्त सूची। सीएनएस निराशाजनक प्रभावको साथ मांसपेशी आराम गर्ने चक्कर, झर्ने, र बुढेसकालमा गम्भीर चोटपटकको जोखिम बढाउन सक्छ।
गर्भवती महिलाहरूमा मांसपेशी आराम गर्ने सिफारिस गरिदैन। यी औषधिहरू साना बच्चाहरूबाट टाढा राख्नुपर्दछ।
मांसपेशी आराम गर्ने कहिलेकाँही हुन्छन् दुरुपयोग र शारीरिक निर्भरता पैदा गर्न सक्छ। दीर्घकालीन प्रयोग पछि यी ड्रग्सको अचानक विच्छेदन फिर्ती लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ। यी औषधीहरू केवल डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको सुपरिवेक्षणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
रोबक्सिन बनाम फ्लेक्सेरिलको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
रोबक्सिन एक मांसपेशी शिथिल हो जुन स्पाइन्स, कमर दुख्ने, र घाँटी दुखाइ जस्ता मांसपेशीहरूको पीडा र अस्वस्थताको उपचार गर्न अनुमोदित छ। यो methocarbamol नामक जेनेरिक औषधिको रूपमा उपलब्ध छ।
फ्लेक्सेरिल के हो?
फ्लेक्सेरिल साइक्लोबेन्जाप्रिनको एक ब्रान्ड नाम हो, मांसपेशियों को दुखाइ र अन्य मस्कुलोस्केलेटल अवस्थाहरूको लागि सामान्यतया सिफारिश गरिएको मांसपेशी आराम गर्ने। साइक्लोबेन्जाप्रिन तत्काल रिलीज र विस्तारित-रिलीज फारमहरूमा उपलब्ध छ।
के रोबक्सिन र फ्लेक्सेरिल एकै हो?
रोबक्सिन र फ्लेक्सेरिल दुबै हुन् मांसपेशी आराम । यद्यपि तिनीहरू समान औषधि होइनन्। रोबक्सिनले मेथोकार्बमोल समावेश गर्दछ र सामान्यतया प्रति दिन धेरै पटक गरिन्छ। फ्लेक्सेरिलमा साइक्लोबेन्जाप्रिन हुन्छ र एक विस्तारित रिलीज फारममा उपलब्ध छ जुन दिनको एक पटक लिन सकिन्छ।
के रोबक्सिन वा फ्लेक्सेरिल राम्रो छ? / कुन राम्रो छ: फ्लेक्सेरिल वा मेथोकार्बमोल?
रोबक्सिन र फ्लेक्सेरिल प्रभावकारितामा तुलनात्मक छन्। केही व्यक्ति विस्तारित रिलीज जेनेरिक फ्लेक्सेरिल यसको एक पटक दैनिक खुराक को लागी प्राथमिकता दिन सक्दछन्। तर, फ्लेक्सेरिलले अधिक प्रतिकूल प्रभावहरू जस्तै सुस्ती र सुख्खा मुखमा पार्न सक्छ। तपाईंको लागि उत्तम औषधी फेला पार्न डाक्टरसँग यी उपचार विकल्पहरूको छलफल गर्नुहोस्।
के म गर्भवती हुँदा रोबक्सिन वा फ्लेक्सेरिल प्रयोग गर्न सक्छु?
त्यहाँ रोबक्सिन वा फ्लेक्सेरिल सुरक्षित वा हानिकारक छ भनेर देखाउन पर्याप्त अध्ययनहरू छैनन् गर्भावस्था को समयमा । यी औषधीहरू मात्र लिईन्छन् यदि उनीहरूको लाभ जोखिम बढी छ। स्नायु आराम गर्नेहरूलाई केवल एक चिकित्सकको मेडिकल मार्गदर्शनको साथ लिनु पर्छ।
के म रक्सीको साथ Robaxin वा Flexeril प्रयोग गर्न सक्छु?
रोबक्सिन वा फ्लेक्सिरिलमा हुँदा मदिरा सेवन गर्न सिफारिस गर्दैन। मदिरा सक्छ कम्पाउन्ड मांसपेशी-आरामदायी साइड इफेक्टहरू जस्तै निद्रा, चक्कर, वा समन्वय गुमाउने।
कुन मांसपेशी आराम गर्ने सबैभन्दा बलियो हो?
व्यवस्थित समीक्षा अनुसार, लगभग सबै मांसपेशी शिथिल प्रभावकारितामा तुलना गर्न सकिन्छ। साइक्लोबेन्जाप्रिन र टिजानिडाइन अधिक उत्तेजक हुन सक्छ। यद्यपि साइक्लोबेन्जाप्रिन सबैभन्दा प्रभावकारी अध्ययन मांसपेशी आराम गर्नेमध्ये एक हो यसको प्रभावकारिताका लागि दृढ प्रमाणको साथ।
कुन तापमान वयस्कों मा ज्वरो मानिन्छ
Celebrex लामो अवधिको उपयोग को लागी सुरक्षित छ
कुकुरहरु लाई लिन को लागी सबै भन्दा राम्रो एलर्जी औषधि
के तपाइँ गोली को पछि बिहान तुरुन्तै लिन सक्नुहुन्छ
कसरी थाहा पाउनुहोस् यदि तपाइँ डेयरी असहिष्णु हुनुहुन्छ
म कसरी मेरो खमीर संक्रमण बाट छुटकारा पाउन सक्छु
वयस्कों को लागी कम रक्त शर्करा को स्तर के हो